Ukugqibela kwe-iClock App Sherlocks / kugqitha kwiOld Apple Mac Macub Clock | Iplum iyamangalisa
2 / 24 / 20
iClock Sherlocks / Ukudlula kwi-Apple Apple Mac Menubar Clock
I-Kaiulua-Kona, i-HI-Sherlocking yayilixesha elihlekisayo eliqanjiweyo xa i-Apple yayikopa ikhuphela endaweni yayo isoftware eyenziwe yenye inkampani. Iwotshi eyaziwayo yeMac. iClock yongeza amanqaku ombane ukuphucula imveliso.
iClock sisixhobo esikhuthaza imveliso nguPlum Amazing. Ukuya kude ngaphaya kwewotshi ye-Macs, iClock ibonelela ngezi zinto kwi-menubar. Ixesha, umhla, isigaba senyanga, inkxaso yeApple kunye nekhalenda kaGoogle / iminyhadala, ii-alamu, ii-chimes ezinezandi ze-chime, ucwangciso lweentlanganiso zehlabathi, Thatha i-5 (ixesha elikhethekileyo le-pomodoro lokuthatha ikhefu), iwotshi yehlabathi kunye noluhlu lwesiko lwezixeko kunye nesixeko idatha, iiwotshi ezijikelezayo, imenyu yohlelo lokusebenza, ukumisa ukubukela, ukubala ukubala kunye neekhalenda zobuqu ezinokuprintwa ezinemifanekiso, ulawulo oluzenzekelayo lwemowudi yokukhanya / emnyama kunye nealam yeelaptop ephathekayo ukuze isetyenziswe kwiStarbucks nakwisikhululo seenqwelomoya. Onke amanqaku afumaneka kwangoko kwaye ngokulula afumaneka kwimenyu yokubonisa. Eyona nto ilunge ngakumbi, eyonwabisayo kwaye eluncedo kunangaphambili. ” Khuphela ukuze uzame mahala:
Khuphela ikhonkco kwi-iClock-Nandipha ukuzama onke amanqaku simahla
Ngomsebenzi wam, andazi ukuba umsebenzi wam uza kundithatha phi. I-iClock interface elula, enembile ayizange indivumele phantsi. Ngokujonga nje ngokukhawuleza kwimenyu yokudonsela ezantsi, ndiyabona ukuba ngubani ixesha apho ndikhoyo… .kwindawo endiya kuyo… nalapho bendiye khona. Ngokucofa elinye, ndingajonga imozulu kwindawo yam elandelayo. Ingaphezulu lee kunewotshi yedijithali yeMac. ”
- UKevin Rafferty,
- Umphathi wempembelelo ezibonakalayo "Ezine eziqaqambileyo: Ukunyuka kweSilver Surfer", "Star Wars: Isiqendu I - Isisongelo sePhantom", "Ilizwe elilahlekileyo: iJurassic Park" kunye nezinye iimovie ezininzi.
I-Plum emangalisayo ye-CEO uJulian Miller uthe: “IClock ngoku sesinye sezona zixhobo zindala nezintsha kwiMac. Ikwayenye yezonaapps zithandwayo neziluncedo. Iphinde yabhalwa ngokutsha kwaye yahlaziywa iMojave Mac OS 10.15. ”
Iwotshi ye-Mac endala ye-Mac ibonisa kuphela ixesha / umhla.
Cima iwotshi ye-Mac yamandulo ye-Mac kwaye usebenzise iClock ukongeza ezi…
iClock Amanqaku amakhulu
Ixesha leHlabathi-Impompo ekhawulezayo yeXesha kwi-menubar ityhila imenyu ngayo yonke idolophu okanye ixesha lendawo kwaye ibonisa ixesha lendawo, imozulu, ulwazi kunye nokunye.
Iwotshi yehlabathi igqibelele kubahambi beelaptop behlabathi.
Khetha isixeko ngexesha lehlabathi ukubonisa imozulu, ulwazi lwendawo, ukuphuma kwelanga…
Ixesha ngombala wesiko, ubungakanani kunye nefomathi yefonti kwimenyu yemenyu
Umhla ngombala wesiko, ubungakanani kunye nefomathi yefonti kwimenyu yemenyu
Mini Apple ikhalenda kunye neziganeko cofa kwimenyu ukujonga.
Ikhalenda encinci kaGoogle kunye neziganeko cofa kwimenyu ukujonga.
Iikhalenda ezincinci zingabonisa 1, 2, 3… iinyanga ezili-12 ngexesha.
Ikhalenda enkulu yedesktop okanye ifestile enefoto.
Ikhalenda enkulu eneekhalenda zobuqu eziprintwayo zobuqu kwiifoto.
Iikhalenda zebhayibhile zingabonisa 1, 2, 3… iinyanga ezili-12 ngexesha lefoto.
Iialamu ezinezandi zesiko. Iindlela ezininzi zokubeka ixesha / umhla.
Inani elingapheliyo lealarm onokulenza ngepompo kunye nokukwazisa kwi-menubar
Yenza naluphi na uhlobo lwefomathi yemihla yemenyu kunye nemenyu.
IiChimes-iBig Ben, iwotshi yecuckoo, kwiyure, kwisiqingatha seyure, njl.
Ucwangciso lwehlabathi lweentlanganiso. Cwangcisa ngokulula iintlanganiso zehlabathi
Thatha igama lesi-5 elithathwe kwisiqwenga sejazz nguPaul Desmod kwaye lidlalwe nguDave Brubeck jazz quartet Thatha u-5 ukhumbuza umsebenzisi, usebenzisa isilumkiso sesandi okanye umculo, ukuthatha ikhefu (ukuzilolonga, ukuphefumla, ukucamngca, jonga kude, njlnjl) lonke ixesha (elenziwa ngokwezifiso). Uhlobo lwexesha le-pomodoro. Ilungele ukubona, ukuvelisa, impilo kunye nolonwabo.
I-IP yangaphandle kunye neNgaphakathi-yongeza ukubona kunye nokukopa i-IP yakho ngaphezulu kwemenyu
Iiwotshi ezidadayo-1 okanye i-30 ngaxeshanye emazantsi okanye kwicala lesikrini
Iiwotshi ezidadayo- zisetyenziswa kakhulu zizinto zorhwebo, abathengisi bemali
Iiwotshi ezidadayo zinokukhetha uyilo lobuso oluhle.
Imenyu ye-App. Dwelisa zonke ii -apps ezisetyenziswayo nezisandula ukusetyenziswa
Yima ubukele. Imicimbi yexesha.
Ukubala ixesha kunye nokubala ixesha lesikhumbuzo, iKrisimesi…
Ngokuzenzekelayo kunye nolawulo lwencwadi yemodi yokukhanya / emnyama.
Ialarm yeLaptop. Kula maxesha ukwi-StarBucks
Zonke ezi zinto zilapha ngasentla zifumaneka kwangoko kwimenyu.
Izandi zealam kunye ne chimes zibandakanyiwe, umculo, okanye umsebenzisi wenziwe
Eyona nto ilunge ngakumbi, iluncedo kwaye iyonwabisa ngalo lonke ixesha langaphambili.
“IClock yonga ixesha! Ndaphinda ndasirobha isixhobo esingabalulekanga kwiPlum emangalisayo. IClock inikezela ngobunono ukulingana okufanelekileyo kokusebenza kunye neempawu. Akukho kumbiwa - akukho kubamba; sisixhobo esilula ngokumangalisayo sokulawula iwotshi yam, ixesha lam, iMac yam. ”
- IRand Miller
-Umdibanisi we-Myst kunye noRiven
Kwi-Mac iClock inyusa ukuvelisa ngokuba nee -apps ezininzi ezinxulumene nexesha zonke zifumaneka ngokucofa ikloko okanye ikhalenda kwi-menubar. Ilungele abaphathi babantu okanye iimveliso. Kukhulu kuye nabani na obandakanyeka kwimidiya yoluntu. Ilungele iinkampani, iingcali, abafundi kunye nabani na oxhomekeke kwaye asebenze nexesha.
“Ndiyakhumbula ndicinga ukuba 'Kutheni ndifuna enye iwotshi' ngaphambi kokuba ndizame iClock. Ngoku ndicinga ukuba 'Ndenze njani ngaphandle kwayo'. ”
-I-CEO, Isithembiso seKept, uMqambi weSoftware
IiRave kunye noPhononongo
Le yinkqubo entle kakhulu.
- NguLeo Laporte KwiMacBreak 261, CEO yeTwit.tv kunye nePodcaster
“Elona xesha ndilifumanayo !!!!”
- UCharles Henry, I-PanTech, Inc.
Kunzima ukucinga ukuba izinto ezininzi kangaka zinokufakwa 'kwewotshi'! ”
- Guy Kawasaki, Umbhali, iBhlogger, uMvangeli, kunye noShishino.
“Ndiyayithanda iapp iClock. Onke amanqaku owathandayo kwaye akukho nanye ongayithandiyo ”
- UAndy Ihnatko, Intatheli, Umbhali, MacBreak Ngempelaveki.
“Andinakuphila ngaphandle kwe-iClock ngoku. Ndiyayithanda kuba ilula, kodwa inezinto ezininzi ezinamandla. Ndiyamangaliswa rhoqo yinto enokuyenza. ”
- UAnil K Solanki
Into enditsalele kuyo kwi-iClock yimenyu yexesha lendawo. Njengoko uyazi ukuba ukuthengiswa kwesoftware kubanzi kwihlabathi liphela ngenxa ye-Intanethi. Xa ndifuna ukwenza umnxeba wenkonzo phesheya kufuneka ndazi ukuba ngubani ixesha kweli lizwe. Ndisebenzise ezinye iimveliso ezifuna ukuqhuba inkqubo ukubona amaxesha, okanye isoftware edibanisa idesktop ngeewotshi. IClock ilula, ayiyiyo-obtrusive kunye FAST. Enkosi ngenkqubo eluncedo kodwa elula ukuyisebenzisa. ”
- UDavid Parrish
Isoftware ePlum emangalisayo namhlanje ibhengeze ingxelo yokugqibela ye-iClock ye-Mac. IClock idlula kude kwi-Apple Clock endala ebonisa kuphela ixesha kunye nomhla. iClock iphucula imveliso kunye nokubulawa kwexesha okunxulumene nee -apps zonke ezifumaneka kwi-menubar kunye nokufikelela kwitephu okanye ezimbini. IClock ibonelela ngexesha, umhla, isigaba senyanga, inkxaso yeApple kunye nekhalenda kaGoogle / iminyhadala, ii-alamu, ii-chimes ezinezandi ze-chime, ukucwangciswa kweentlanganiso zehlabathi, ixesha le-pomodoro, iwotshi yehlabathi, iiwotshi ezidadayo, imenyu yeapp, ukumisa ukubukela, ukubala ukubala, kulula ukufikelela kunye nokuzenzekelayo kwimodi yokukhanya / emnyama, ialam yeelaptop kunye neekhalenda zobuqu ezishicilelweyo ezinemifanekiso kunye neefoto zonke ezikhoyo ngempompo kwimenyu yokubonisa. Yonwabela ukwanda kwemveliso yakho kunye neClock.
Ulwazi kunye neeKhonkco zemizobo ye-iClock
iClock yoLwazi lwePhepha
Khuphela ikhonkco kwi-iClock-Nandipha ukuzama onke amanqaku simahla.
Iscreen 1 -Alarms ukhetho
Iscreen 2-Ukucofa kwiXesha kutyhila le menyu yezixeko / ixesha lendawo kunye neendlela ezikhawulezayo zokufumana ulwazi lwasekhaya.
Isikrini 3-Ukukhetha ixesha.
Isikrini 4-Thatha i-pomodoro timer esikhumbuza ukuba ufumane umthambo omncinci kwaye uphumle amehlo akho iyure nganye.
Isikrini 5-Setha ii-alamu ngqo kwimenyu yexesha.
Plum emangalisayo Website
Ivenkile yePlum emangalisayo
Malunga nePlamu emangalisayo
IPlum emangalisayo, i-LLC yinkampani eyimfihlo ebekelwe ukwenza ii-Mac, iiWindows, ii-Android kunye neeapps ze-iOS. IPlum Amazing ngumboneleli wehlabathi wesicelo sedesktop kunye nedesktop ukusukela ngo-1995. IPlum Amazing yenza kwaye ithengise isoftware ngeyayo, iwebhusayithi kaGoogle kunye neApple kodwa ikwenza nomsebenzi wophuhliso (wenkqubo) wezinye iinkampani kunye nabaxumi ngakumbi kwindawo yokufota. Sinomdla wokwenza iimveliso ezinkulu ezinjengeCopyPaste, iWatermark, yKey, iClock, iTinyAlarm, iTinyCal, iPixelStick, iSpeechMaker, iPhotoShrinkr nezinye. Ilungelo lokushicilela (C) 2020 Plum emangalisayo. Onke Amalungelo Agciniwe.
Qha ga mshelwano
Iprofayile kaFacebook: View
Plum emangalisayo: View
IPlum emangalisayo inikezelwe ekwenzeni ii-iOS, iiWindows, iiWindows kunye neeMac.
IPlum emangalisayo ibonelele ngeapps kwihlabathi lonke kule khulu leminyaka edluleyo. Ukwenza nokuthengisa isoftware yeMac kunye neWin ngokusebenzisa le plumamazing.com indawo. Izinhlelo zethu ze-Android zifakiwe kuGoogle Play. Ivenkile yeApple's App inezinto zethu ze-iOS kunye nezinye ii -apps zeMac.
Sikwenza nenkqubela phambili yokusetyenziswa kweenkampani kunye nabaxumi. Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi.
Iindaba kunye nokunye (okuxhaphakileyo)
© 2019 Plum Ngokumangalisayo Onke amalungelo agciniwe
Ezomthetho | Imfihlo
× iimveliso (ii) zongezwa kwinqwelo → ×
Siyayibulela ingxelo yakho
Siza kuphendula ngokukhawuleza
I-Plum emangalisayo, i-LLC